Umshini wokushisela waseChina, umshini wokushisela we-DC, umshini wokushisela we-AC, imaski yokushisela, izesekeli zokushisela ifektri nabakhiqizi Boda
Inhloso yomshini wokushisela kagesi ukuxubanisa i-solder nezinto okufanele zishiselwe ngokusebenzisa i-arc esezingeni eliphakeme eyenziwe yi-short-circuit esheshayo phakathi kwezigxobo ezinhle nezimbi, ukuhlanganisa izinto oxhumene nazo.
Isakhiwo saso silula, siyisiguquli esinamandla amakhulu. Umshini wokushisela ungahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili ngokuya ngohlobo lwamandla okukhipha, enye i-AC yokuphakelwa kwamandla, enye igesi kagesi. Basebenzisa umgomo we-inductance, i-inductance izokhiqiza ushintsho olukhulu lwevolthi lapho icisha futhi icisha, bese isebenzisa i-voltage ephezulu arc eyenziwe isekethe elifushane lesikhashana phakathi kwezigxobo ezinhle nezimbi ukuncibilikisa i-solder ku-electrode, ukuze bakwazi fezekisa injongo yokubopha i-athomu.
Imishini yokushisela kagesi isetshenziswa kabanzi. Umshini wokushisela uyithuluzi elibaluleke kakhulu kumabhizinisi amakhulu wokwakha imikhumbi, amabhizinisi ezimboni nezimayini kanye namabhizinisi ahlukahlukene wokwakha. Umshini Welding kagesi usetshenziselwa ukuwelda ngezinto ezibonakalayo, futhi ugesi usetshenziswa.
Ikakhulu, amanye amayunithi amancane wokwakha athenga imishini eshibhile yokushisela kagesi ukuze wonge izindleko. Kulula ukudala ukushaqeka kukagesi, umlilo nokudilizwa uma kusetshenziswa endaweni enokhahlo yendawo yokwakha, okuzobeka engcupheni ukuphepha komuntu nokuphepha kwempahla. Ngenxa yekhwalithi yokushisela embi, kungenzeka ukuthi kudilike iphrojekthi yokwakha.
Izinzuzo zomshini wokushisela we-DC: okubaluleke kakhulu ukuthi i-arc izinzile ngesikhathi sokushisela kwe-DC, ngoba okwamanje akuyona iphuzu le-zero, ingagcina ukuvutha kwe-arc ngaphansi kwamanje okuncane kakhulu, futhi ngokuyisisekelo kungasebenza zonke izinhlobo zezinduku zokushisela; ukungena kwe-welding kukhulu, futhi ngasikhathi sinye, konga amandla. Okubi komshini wokushisela we-DC: I-DC kulula ukuchema i-arc, i-current ayikwazi ukuba nkulu kakhulu.
Izinzuzo zokushisela i-AC yilezi: okokuqala, akulula ukuchema i-arc; okwesibili, isekethe elijwayelekile le-AC welding machine lilula futhi izinga lokwehluleka liphansi kakhulu; Ububi be-AC welding machine bumi ngokulandelayo: ngokuvamile, bukhulu futhi bukhulu; ngasikhathi sinye, ukusetshenziswa kwamandla kwe-transformer kukhulu futhi ukusetshenziswa kwamandla kubi kakhulu, futhi okokufaka kwesigaba esisodwa kuthinta ibhalansi yegridi yamandla.
I-BOSENDA ihlinzeka ngochungechunge lwemishini yokushisela kusuka ku-DC welding ne-AC welding. Umshini wokuwelda nawo ungenziwa ngezifiso, singenza kokubili i-OEM ne-ODM. Ngemininingwane engaphezulu, zizwe ukhululekile ukusibuza.
Langaphambilini Iteyipu kagesi, itheyiphu yokushisa omlilo, ithephu ye-PVC, itheyipu yokuhlukanisa
Olandelayo: Indwangu ye-PVC yemvula, indwangu yobufakazi bemvula ye-PE, ikhava yeloli
Umshini Wokushisela we-Ac
Umshini Wokushisela we-Dc
Isinyathelo sokuprakthiza, titanium plated step drill, hexagon ...